Mohamed Rahin – Page 41 – Muslim Book
” မြတ္စလင္မ္တုိင္း ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ ျပဳက်င့္ရန္ တာဝန္ ၁၂ ခ်က္ “
ဟူကူကွလ်လာဟ် (အလ္လာဟ့်အပေါ် ထားရမည့် တာဝန် ) ၆ ချက် ၁– နေ့စဉ် ကလေမာဟ် ဖတ်ပါ။ ၂– နေ့စဉ် သောင်ဗာဟ် ဖတ်ပါ။ ၃– နေ့စဉ် ဒရူးဟ် ဖတ်ပါ။ ၄– နေ့စဉ် ကုရ်အာန် ဖတ်ပါ။ ၅– နေ့စဉ် ဆွလာ့သ် ဝတ်ပြုပါ။
ဂျုမုအဟ်နမားဇ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် – “စွဗ်ဟာနက်လားဟီလ် အဇွီးမိ ဝဗိဟမ်းဒိဟီ” ကို အကြိမ်(၁၀၀)ဖတ်မယ်ဆိုလျှင် ဂိုနာဟ်အပေါင်း ၁၀၀၀၀၀(၁သိန်း)ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှ မားဖ်ပြုလုပ် ခွင့်လွှတ်မှုပေးသနားတော်မူမယ်။ မိခင်၏ ဂိုနာဟ်(၁၂၀၀၀)နဲ့ဖခင်၏ဂိုနာဟ် (၁၂၀၀၀)ကိုပါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ မားဖ်လုပ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ထိုနည်းအတိုင်းပဲ – စူရာဟ်ကူလ်ဟိုဝလ္လားဟု (၇)ကြိမ် စူရာဟ်ကူလ်အအူးဇုဗိရဗ်ဗလ်ဖလားက် (၇)ကြိမ် စူရာဟ်ကုလ်အအူးဇုဗိရဗ္ဗီလ်နားစ် (၇) ကြိမ် (၇) ကြိမ်စီဖတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်
ယေန႕ ၾကယ္တစ္ပြင့္ ေျကြလြင့္ျပန္ပီ
ဒါရွလ်အူလူးမ် ဝက်ဖ် ( ဒေယိုဘန်ဒ် )ရဲ့ ရှိက်ခ်ခွလ်ဟဒီးစ်ဆပ် ဟဇ်ရသ် မော်လာနာဂိုလာမ် နဗီ ကရှ်မီရီ (ရဟ) သည် ယနေ့ နံနက် 7.11.2019 ကြာသာပတေးနေ့တွင်အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ်၏ အမိန့်ကိုခံယူသွားပါသည် ဆရာသခင်း၏ ကဗရ်အားမျက်စေ့အဆုံး ကျယ်ဝန်းစေတော်မှုပါ ကျောင်းသားများ တပည့်များနှင့် မိသားစုဝင်များအား Allah သျှင် စွဗ္ဗရ်ဂျမီးလ်
ၾကံ့ခိုင္တဲ့ မိခင္က ၾကံ့ခိုင္တဲ့ သမီးေလးကိုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ပါတယ္…. ဘယ္လိုပ်ိဳးေထာင္မလဲ…? ဒီစကားေလးေတြသင္ထားေပးပါ….
ကြံ့ခိုင်တဲ့ မိခင်က ကြံ့ခိုင်တဲ့ သမီးလေးကိုပျိုးထောင်နိုင်ပါတယ်…. ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ…? ဒီစကားလေးတွေသင်ထားပေးပါ…. — မှန်သောစကားကိုသာ ဆိုပါ… ရဲရဲရင့်ရင့် နေပါ…. သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ နေပါ…. ကိုယ့်အရှိတရားကို လက်ခံပါ…. ကိုယ်အောင်မြင်တဲ့အခါ ပျော်ရွှင်မူ့ ကို ဆင်နွှဲပါ… ကိုယ်မအောင်မြင်တဲ့အခါပြုံးလျှက်အောင်မြင်သူကို ချီးကျုးပါ…. မုဒိတာပွားပါ…. — အောက်ခြေမလွတ်ပါနဲ့…. — ဂုဏ်မမောက်ပါနဲ့…. —
နစာအီက်မ္း တြင္ လာရွိသည္မွာ …. သလဲသီး စားတဲ့အခါ တစ္ေစ့မက်န္ အတြင္းအခြံပါ ပါေအာင္ ဝါးစားပါ
နစာအီကျမ်း တွင် လာရှိသည်မှာ …. သလဲသီး စားတဲ့အခါ တစ်စေ့မကျန် အတွင်းအခွံပါ ပါအောင် ဝါးစားပါ။ သလဲသီး တိုင်းမှာ ဂျန္နသ်သုခဘုံ ထဲက ရေတစ်စက် မုချပါဝင်နေပါတယ်။ သလဲသီး ဟာ ဂျန္နသ် က အသီးတစ်ခုပါ။ သလဲသီး မှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကိုယ်ခန္ဓာ